Nzira shanu Dzokudzivisa Upombwe Muwanano | NZIRA DZOKUNAMATA
musha Kurarama nehumwari Nzira 5 Dzokudzivisa Upombwe Muwanano
Nzira 5 Dzokudzivisa Upombwe Muwanano
Nhasi tichange tichishanda nenzira shanu dzekudzivisa hupombwe muwanano. Mubhuku raEksodho 5:20 Usaita upombwe. Upombwe Imhosva huru pamberi paMwari Wemasimbaose. Mwari anoda hutsvene, Anoda kuchena ndosaka akataura kuti hupombwe hunofanira kurambwa.
Mambo David akaunza dambudziko mumhuri yake paakazoita hupombwe. Akarumbidza chiitiko ichi kumukadzi wemuranda wake akatendeka, Uria. David akarara naUriya ndokumupa pamuviri. Senge izvo zvaive zvisina kukwana, akaita kuti Uriya aurawe munhandare yehondo kuti afukidze zvivi zvake. Mwari haana kufadzwa naDavidi nezvaakaita, saka mwana akagamuchirwa kubva pakubata pakati paDavid nemukadzi waUriya akafa. Mwari aifanira kubvisa mhodzi yekusavimbika.
Vatendi vazhinji vanoona zvichinetsa kurega upombwe kunyangwe vari muparidzi anoshingairira kana Kunamata. Dzimwe nguva tinoshamisika kuti sei zvakaoma kudzivisa upombwe. Kutanga isu tinofanirwa kunzwisisa kuti sei Mwari vakaraira kuti hatifanire kuita upombwe.
Nei Mwari Vakati Kunyange Vasingazopombwe
Kunoparadza Icho Chekutanga Chinangwa chaMwari CheKuroora
Hupombwe hunoparadza chinangwa chekutanga chaMwari chekuroora. Mwari akataura kuti hazvina kukwana kuti murume agare ega ndosaka Mwari akasika mukadzi kubva kumurume. Chinangwa chepanyama chaMwari chaive chekuti murume agare nemukadzi. Hazvishamise kuti rugwaro rwunoti mubhuku raGenesisi 2:24 Naizvozvo murume achasiya baba vake namai vake, abatanidzwe kumukadzi wake, vova nyama imwe. Chinangwa chebonde ndechekuti zviitwe mukati meganhuriro dzewanano. Chero zvekuita bonde kunze kwemuchato chivi uye chinangwa chewanano ndechekuti murume nemukadzi vave pamwe chete voita muviri mumwe.
Upombwe Huparadza Muchato
Upombwe hunoparadza wanano. Kana murume kana mukadzi apinda muhupombwe, zvinokanganisa kuyerera kwezvinhu mumuchato. Vamwe vavo vachatambura uye vana vavo vachatambura nazvo. Kune chibvumirano chinoshamisa chinobatanidzwa pabonde, chinounza kuzvipira nekubatana, ndosaka Mwari vakaraira kuti zviitwe mukati mewanano.
Mhuri yaMambo David yakanzwa kupisa kwakasimba kwehupombwe mushure mekunge mambo arara nemukadzi waUriya uye abata mwana. Rufu rwakapinda mumba memunhu aionekwa semurume aiteerera moyo waMwari. Kunyangwe David achinamata zvine simba kuna Mwari kuti arege hupenyu hwemwana, Mwari vakatora mwana vakaenda. Upombwe hunoparadza rugare rwe a mhuri.
Upombwe Husingakudzi Mwari
Mwari anoda kuti tidzivise zvese zvisingakudze zita rake dzvene. Chinangwa chekuvapo kwedu kuve neikoinonia naMwari. Chimwe chezvinhu chinotyora nzira yekutaurirana pakati pemunhu naMwari zvivi. Hupombwe chitadzo icho mweya waMwari wakafinyamisa pachiso ndosaka Mwari vakaraira kuti tirege pazviri.
Mwari anoda kuti tifarire zvinhu zvinokudza zita rake Dzvene chete. Kana tikapinda muhupombwe, tinotanga kupa evhangeri yaKristu zita risiri iro risingakwani.
Nzira Shanu Dzokudzivisa Upombwe
Iva Nekutya Mwari
Chinyorwa chinoti kutya ishe ndiko kutanga kwehungwaru. Tinoda Huchenjeri hwaMwari kuti tirege hupombwe. Joseph aikurumidza kuziva kutya kwaIshe ndosaka aive nehungwaru zvekutiza. Bhuku raGenesisi 39: 9 Hakuna mukuru mumba mangu kupfuura ini, uye haana kundinyima chinhu kunze kwako, nekuti uri mukadzi wake. Zvino ndingaite seiko chinhu ichi chakaipa kwazvo, nditadzire Mwari?
Joseph akanzwisisa kuti huipi hwaanoda kuita haungopesane naboss vake chete asi zvekare kutadzira Mwari Uye nekuti aitya Mwari zvakanyanya, aigona kurega kurara nemukadzi watenzi wake.
Ziva Nguva yekutiza
Izvi zvichiri zvehungwaru. Chinyorwa chinoti huchenjeri hunobatsira mutungamiri. Haufanire kumirira kukanda nekusunga dhimoni rausingaone kana uchiedzwa kupinda nemumwe mukadzi asiri mukadzi wako. Sa mucha sezvaunonamata zvikuru, unofanira kuzivawo nguva yekutiza uye usazombotarisa kumashure.
Joseph akakwanisa kukunda muyedzo wekurara nemukadzi watenzi wake kwete nekuti iye chete anotya Mwari, asi nekuti aiziva nguva yekumhanya. Iwe unofanirwa kuziva iyo chaiyo nguva yekumhanya uye usazombotarisa kumashure panouya muyedzo. Mambo David akawira pamuedzo nekuti akatarisa kune zvakawanda uye aisaziva nguva yekutiza. Iko hakuna kudikanwa kwekukanda nekusunga chero dhimoni, mhinduro irimo iwe unoziva yakanakisa nguva yekumhanya uye usatombocheuka kumashure.
Funda Izwi raMwari uye Namata
Chikamu chemunamato washe chinoti izvo zvinotitungamira kwete mukuyedzwa asi kutinunura kubva kune zvakaipa zvese. Unofanira kutarisa uye kunamata. Chinyorwa chinoti izwi raishe mwenje wetsoka dzangu, mwenje wenzira yangu. Kana tichidzidza izwi raMwari, tinowana kunzwisiswa kuri nani kwekuti Mwari ndiani chaizvo uye zvaasiri.
Ipo isu tichinamata kuna Mwari, isu tinofanirwa kukumbira kuti isu tisatungamirirwe mumuedzo uyo uchave muhombe pane izvo zvatakatakura.
Ida Wako Wako Wadiwa
Chimwe chezvikonzero zvikuru zvehupombwe kushaya rudo. Mushure mekunge Mwari vapa iyo gumi mirairo pakauya Kristu, akabvunzwa kuti ndeupi mirairo yaive wechokwadi uye wakanyanya kukosha, Kristu akati ndirwo rudo.
Kana iwe uchida muvakidzani wako sekugara kwaunoita iwe, haungade kuita chero chinhu kuyedza mukadzi wako. Rudo runoita kuti iwe urumbidzirwe kumubatanidzwa, kana danho rako rekuzvipira rasvika padanho, zvinova zvakaoma kwazvo kwauri kuenda nemumwe mukadzi kana murume.
Taura Kune Mumwe Munhu Kuti Abatsirwe
Rimwe rematambudziko anoita vatendi kufunga kuti havadi rubatsiro kubva kune chero munhu. Ehe, iwe unogona kuita zvese zvinhu kuburikidza naKristu zvinokusimbisa, zvisinei, iko kuunganidzwa kwehama hakufanirwe zvakare kusiiwa. Kana muyedzo wehupombwe ukatanga kuwedzera mumoyo mako, usangomukoti kana kupokana nekunzwa ikoko wega, unofanira kuedza kutaura nevanhu kuti iwe uve neruzivo rwechakashata.
Dzimwe nguva ungangoda kutaura pasita wako kana chipangamazano. Ivo vari muchinzvimbo chekukubatsira iwe kukunda mweya wehupombwe.
Previous nyaya10 Rugwaro Kutanga Zuva Rako
inotevera5 Nzira dzeKudzivisa Hufeve seSingles
5 Akakosha Mhedzisiro yaGoriati muHupenyu hweMutendi
Natty Onumara iwe June 16, 2021 pana 2: 25 pm
Kutenda zvakanyanya nekunzwisisa kwako kukuru nezve hupombwe. Ndinonamatira avo vakanganiswa kuti vasunungurwe muZita raJesu Simba.
Makumi mashanu Masimba Emunamato Anopesana neVen'anga Varoyi
6 Mvumo yeMunyori manongedzo ekuporesa uye kununurwa
20 minamato manongedzo Kupesana Nerima Rekunamata
Munamato wekuti Mwari vataure kubudikidza neni
Nongedzo dzeminamato yekureverera nemaVhesi eBhaibheri
Kutsanya Neminamato Yekunaya Kwemasimba
NEMUNYENGETERO WENYAYA yeZAMBIA
Hondo Munamato Pfungwa Matanho Ekudzosera Akavanzika Tembere
Minyengetero Yakasimba Yekukunda Iwe Kukurudzira